U Channel Base Railing dia heverina ho rafitra fitaratra mora indrindra apetraka. Ity rafitra ity dia misy amin'ny sakany 62/67 / 70.5mm, 102mm ny haavony, ary miasa tsara amin'ny vera matevina 12mm ka 25.52mm.
Raha te hahita fahitana mahafinaritra sy vaovao — safidio ny U Channel Base Glass Railing System.
Ny rafitry ny lalamby fitaratra dia vita amin'ny vy vy manify izay manaraka ny sisin'ny lalamby, mitazona ny takelaka fitaratra tsirairay.
Ny tampon'ny takelaka fitaratra dia afaka mihetsika toy ny tanamanga - koa tsy ilaina ny manampy fehezan-by na hazo.
Saingy ny pataloha vita amin'ny vy manify dia azo ampiana eo an-tampon'ny takelaka, ho an'ny endrika marevaka sy vita.
KEVITRA mahavita SIZE / SPACING
BASE Kiraro Aluminium misy akanjo mitafy # 6 loto 2.7 "* 4" Basin-kiraro, fampidirana max.OCglass 5'-0 ".
Fasia na Top mount
FENO Glass Mazava, miloko na voankazo Min.1 / 2 "vera misy laminated miaraka amin'ny PVB na SGP interlayer Glass hatevin'ny fenitra: 1/2", 5/8 ". 3/4" hatevin'ny fenitra interlayer, SGP: 0.035 ", 0.06" / PVB: 0.035 "
TOP RAIL U-Cap # 6 loto 1 "Haavo U-Cap
RANO TANANA Inôksa # 6 loto na ECM ø1-1 / 2 “na 2"
Ilaina amin'ny tohatra
Stainless vy w / LED ø1-1 / 2 "misy 3000K na 4000K LED, salantsalany na haavo avo lenta, solomaso mazava na frosted
Hazo (Hazo mena, Cherry na Maple) Tsy misy loto ø2 "
Hazo (Hazo mena, Cherry na Maple misy LED) ø2 "misy taratra 3000K na 4000K LED, solosaina antonony na avo lenta, masomaso mazava na Frosted
Dingana1: Alefaso ny fandrefesana na ny sarinao amin'ny tetikasa
Amin'ny dingana voalohan'ny fizotrany dia azonao atao ny mandefa anay ny fandrefesana na ny tetik'asa ataonao. Raha tsy manana ny refy ianao dia hampianarinay anao ny fandrefesana azy. Mandritra ity fotoam-pivoriana ity, ny ekipa mpamolavola antsika dia hifampiresaka aminao na ireo olan'ny fikaroham-bahaolana momba ny injeniera.
Mifandraisa amin'ny ekipan'ny Design mba hahazoanao teny namboarina manokana ary manomboka ny fizotran'ny injeniera ny lalamby vaovao.
Amin'ny fandrefesana eo ho eo fotsiny dia afaka manome anao vidiny amin'ny lalamby ilaina amin'ny tranonao sy ny habakao izahay! Aza manahy momba ny fametrahana mazava tsara amin'ity dingana ity izao, raha vantany vao vita ny teny nalaina, dia manangona ny sisa amin'ny fampahalalana ilaina ny ekipanay.
Dingana 3: Teny nindramina
Ny vidin'ny rafitry ny lalamby fitaratra U dia ho faritana amin'ny haben'ny lampihazo ilainao, ary koa ny safidy farany safidinao.
Izahay dia namorona tombana amin'ny vidiny an-tserasera azonao ampiasaina mba hahitana hevitra ankapobeny momba ny vidin'ny rafitra ho an'ny fampiharana anao, ary ho hitanao ny fiantraikan'ny safidy farany amin'ny vidinao.
Dingana 4: Fanamboarana lamasinina
Aorian'ny fankatoavana ny sarin'ny fivarotana, ny rafitry ny lalamby fitaratra misy anao dia mandeha amin'ny famokarana ao amin'ny orinasa any Foshan, Sina. Izahay dia manana fitaovana fanamboarana hazo, vy ary fitaratra ka afaka manamboatra ny sakan'ny tohatra sy ny arofaninao rehetra izahay.
Ny ifantohan'ny fizotrantsika dia ny fanaovana ny fizotry ny fametrahana ho tsotra araka izay azo atao. Ny vy sy ny vera dia tapaka amin'ny halavany ilainao. Afaka nanao izany marimarina kokoa isika satria mifehy ny fizotran'ny injeniera ho an'ny rafitra iray manontolo, ary mahatonga ny fizotran'ny fametrahana ho asa tsotra.
Dingana 5: fametrahana
Raha vantany vao noforonina ny rafitra fiarandalamby dia halefanay amin'ny alàlan'ny fampidirana torolàlana amin'ny fametrahana azy io ary hanome torolàlana momba ny fametrahana an-tserasera. Ny vokatray dia mora fametrahana DIY ary ny ankamaroan'ny tsy mila welding. Ny ankamaroan'ny tetikasa dia afaka vita ao anatin'ny andro vitsivitsy monja.
Raha ilaina, ACE koa dia manome fametrahana amin'ny varavarana.
Teo aloha: Decking Steel Steel Stainless Steel
Manaraka: Aluminium Post Handrail Powder Coated Balustrade System
Taratasy fanodinana aluminium
Fiakarana tohatra aluminium
Làlan'ny alimina vita amin'ny alimina vita amin'ny vovoka
Tohatra fiakarana aluminium
Aluminium Post Handrail Powder mifono balustrade ...